လက်နက်ဖြင့် ဖိအားပေးသဖြင့် ထားဝယ်ချောင် အမှိုက်ပုံကို အမှီပြုနေရသူ မိသားစု၇၀ ကျော် ပြောင်းရွှေ့ရ - Myanmar Pressphoto Agency
DaweiChaung destroy MPA North Dagon squatters’ Yangon
News December 2, 2021 ·0Comment
ရန််ကုန်မြို့၏ အကြီးဆုံးအမှိုက်ပုံကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် ထားဝယ်ချောင် အမှိုက်ပုံဘေးတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသည် နေအိမ်များကို ငါးရက်အတွင်းဖယ်ရှားရှင်းလင်းကြရန် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က သတိပေးစာပို့ထားသည့်အတွက် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် ယနေ့တွင် ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့လာတဲ့နေ့က စစ်သား၇ယောက်လောက် လက်နက်တွေနဲ့ လာကြတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့် သူတို့အနေနဲ့ ကြောက်ပြီး ပြောင်းကြရတယ်” ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန် မြို့မြောက်ဒဂုံနှင့် အရှေ့ဒဂုံ မြို့နယ်ရှိ အဆိုပါ ထားဝယ်ချောင် အမှိုက်ပုံတွင် နေထိုင်လျက်ရှိနေသော နေအိမ်များကို ယနေ့နိုဝင်ဘာလ၂၅ရက်နေ့မှစ ဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့ အတွင်းရွှေ့ပြောင်းကြရန် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ သတိပေးစာ ပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အိမ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် ပြောင်းရွှေ့သွားပြီး မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သေးသည့် အိမ်များမှာ အသနားခံစာ တင်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်း၇ကျောင်းနှင့် သီလရှင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းအပါအဝင် ထားဝယ် ချောင် အမှိုက်ပုံနံဘေးတွင် နေထိုင်လျက်ရှိနေသာ နေအိမ်ပေါင်း ၇၉အိမ်ရှိသည်။
နေထိုင်သူတစ်ဦးက “ဘယ်ကိုပြောင်းရမှန်း မသိကြသေးဘူး။ အခုမှာတော့ ပိုက်ဆံလည်း မရှိသေးဘူးလေ။ အခုတော့ ဘာဆက်လုပ်ကြရမှန်းမသိဘူး။ အိမ်ငှားဖို့ကလည်း ဘယ်လိုမှမလွယ်ဘူးလေ“ ဟု ဆိုသည်။
ကျူးကျော်နေထိုင်ကြသူ အများအပြားမှာ အမှိုက်ပုံတွင် ရေသန့်ဘူးကောက်ခြင်း၊ သံတိုသံစများ ရှာဖွေခြင်းစသည်ဖြင့် အမှိုက်ပုံကိုမှီပြီး ရှာဖွေစားသောက်နေကြရသူများ ဖြစ်သည်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ပြီးခဲ့သော လပိုင်းအတွင်းစတင်ပြီး ကျူးကျော်ဖျက်သိမ်းများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ် လာပြီး ကျူးကျော်နေထိုင်သူများကို ပြီးခဲ့သည့်အစိုးရက ထုတ်ပေးထားသော စမတ်ကတ် ကိုင်ဆောင်ထား သူများကိုပါ အတင်းအကြပ် ရွှေ့ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခဲ့ခြင်းသည်။
# လက်နက်ဖြင့်ဖိအားပေးသဖြင့် #ထားဝယ်ချောင်အမှိုက်ပုံကိုအမှီပြုနေရသူ #မိသားစု၇၀ကျော်ပြောင်းရွှေ့ရ #MPA
Due to Pressure with Weapons, over 70 Families Relying on Dawei Chaung Dump Site Move
Following the terrorist military’s warning letters to move their houses within five days, residents at Yangon’s biggest dump pile, Dawei dump site, had to move on the 1st of December.
“When they came here, about seven soldiers, they were with guns. So they were afraid and moved,” saidaresident.
Those living at the dump site, located in Yangon’s North Dagon and East Dagon, were sent warning letters by the CDC on the 25th of November to move until December 1.
Currently, over 70 households have already moved and those who could not move reportedly sentapetition. Including7monasteries and one nunnery, there are 79 houses at Dawei Chaung dump site.
“I don’t know where to move. Now, we don’t have money either. I don’t know what to do next. Rentingahouse is not easy”, saidaresident.
The majority of the squatters makealiving by searching water bottles, bits of steels from the dump pile.
Since the previous month, the terrorist military has been destroying squatters’ areas and they are also forcing those who hold smart cards issued by the previous government to move.
#PressuredwithWeapons #DaweiChaungResidents #Over70HouseholdsMoved #MPA